How to Apply - Somali — Baxter Academy for Technology and Science
How to Apply - Somali
Fiiro gaar ah: Nidaamka codsiga oo sannad dugsiyeedka 2019 - 2020 ma bilaabanayo illaa 30ka Nofeembar, 2018.
Qorshaha ugu horeeya ee diiwaangelinta wuxuu dhamaanayaa Janaayo 31, 2019 4:00pm galabnimo. Dhammaan codsiyada la helay wixii ka dambeeya 4:00pm galabnimo Khamiista, Janaayo 31, 2019 ayaa lagu qori doonaa xagga hoose ee liiska sugidda sida waafaqsan shaabadda.
Machadka Baxter ayaa martigeliso kulanka Ardayda Mustaqbalka oo saddex maqrib oo kala duwan inta lagu jiro deyrta iyo qaboobaha. Inta lagu jiro maqribyadaan, inta u dhaxeyso lix iyo sideed pm, ardayda iyo qoysaskooda waxay leeyihiin fursada looga qeybgalayo sadex aqoon isweedaarsi oo mowduucyo kala duwan oo la xiriiro nolosha Baxter.
Inta ugu badan aqoon isweedaarsigaan waxaa hogaamiyo ardayda Baxter ee hadeer oo waxay siiyaan ardayda imaaneyso warbixinta ku saabsan wax walba ee ku saabsan koorsooyinka Sayniska Kumbuyuutarka oo waaya aragnimada fasalka 9aad.
Sannadkaan kulanka waxaa lagu qabanayaan maqribkii 185 Lancaster ST oo taariiqaha xigga ah:
Talaado, Noofeembar 27, 5: 30-7: 30PM - LAGU BIXIYAYO IWM
Isniin, December 10, 5: 30-7: 30PM
Arbaco, Janaayo 9, 5: 30-7: 30PM
rsvp ee guriga furan halkan
Maalin Furan: Janaayo 9
Ardayda soo koraysa waxay ku soo dhaweynayaan inay nagu soo biiraan maalin koorasyo ah si ay ula kulmaan macalimiinta iyo ardayda Baxter ee amiiradda.
LOTTERY: Wednesday, February 6th, 6PM
Si aad u buuxisid codsigaaga, dugsiga waa inuu helaa warqadaada rabitaanka xiliga Janaayo 31, 2019 saacada 4:00 pm. Haddii tirada codsadaha uu dhaafo qeybaha tirada la heli karo, baqtiyaanasiibka diiwaangelinta ayaa la qabanayaa si loogu go’aansado cida la diiwaangelinayo Febraayo 6, 2019 saacada 6:00 pm.
Fadlan ogow: Dhammaan walaalaha ardayda hadeer waxaa la diiwaangelinayaa baqtiyaanasiibka ka hor. Machadka Baxter sidoo kale wuxuu siiyaa doorbiditaanka diiwaangelinta carruurta shaqaalaha dugsiga ee waqtiga buuxo, xubnaha guddiga, iyo aasaasayaasha, haddiiba ay ka koobantahay wax aan ka badneyn boqolkiiba 10% ee guud ahaan dadka ardayda dugsiga.
Si laguu geliyo liiska sugitaanka ee sannad dugsiyeedka 2018 - 2019, fadlan dhameystir codsiga aad ka heleysid halkaan.
Waraaqaha oo dhameystiran ee rabitaanka waa in lagu soo diraa:
Anna Gervais - Xiriiriyaha Adeega Ardayga (anna.gervais@baxter-academy.org)
Machadka Baxter oo Cilmiga farsamada iyo Sayniska
Markii kadib markii muddada codsiga caadiga ah dhamaado 31-ka Janaayo, waa lagu soo ogeysiinayaa heerka diiwaangelintaada. Haddii ay jiraan codsadayaal badan badelkii la heli karo qeybaha diiwaangelinta, waxaa lagu soo ogeysiinayaa xaaladaha baqtiyaanasiibka.
Haddii baqtiyaanasiib aan laga maarmin, waxaa la qabanayaa saacada 6:00 pm oo Arbacada, Febraayo 6, 2019.
Baqtiyaanasiibka wareegta ah ayaa go’aansaneyso diiwaangelinta iyo heerka liiska sugitaanka oo dhammaan ardayda dhameystirtay nidaamka codsiga hore.
Haddii aad heshay qeybta diiwaangelinta, waxaad kadib heleysaa 14 maalmood oo lagu xareynayo Balanqaadkaaga Diiwaangelinta iyo Machadka Baxter oo Cilmiga farsamada iyo Sayniska. Markii Xiriiriyaha Adeegyada Ardaydeena helo foomkaan, booskaaga ee Baxter waa la celinayaa. Waxaad marwalba haysataa iqtiyaarka lagu dooranayo inaad iska dhaaftid booskaaga.
Arday walba oo codsanayo kadib baqtiyaanasiibka ee Febraayo oo sannad dugsiyeedka 2018 - 2019 waxaa lagu meeleynayaa liiska sugitaanka sida waafaqsan diiwaanka waqtiga.